ပိုက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်မှို | ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုဝန်ဆောင်မှု - CBPMM
ပလပ်စတစ် Cap မှို
ပိုက်လျောက်ပတ်တန်ဆာများအသုံးပြုမှုအရည်အသွေးမြင့်ပိုက်နှင့် fittings ထုတ်လုပ်ဘို့ ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာနေသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအမြောက်အမြားအတွက်ပိုက်နှင့် fittings ထုတ်လုပ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်မြင့်မားဖြစ်ကြောင်း တိကျသော , တူညီများနှင့် တသမတ်တည်း ပိုက်နှင့် fittings များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအရာ။
အဆိုပါ ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အစွန်းနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူပေးပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါတယ်။
injection တန်ဆာလည်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Eco-friendly ကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းအလွန်လျော့နည်းအပိုင်းအစပလပ်စတစ်ထုတ်လုပ်အဖြစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်။
ပိုက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်မှိုများအတွက်ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များ
အဆိုပါဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်အားကုန်ထုတ်ပိုက်နှင့် fittings များအတွက်အသုံးများဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကုန်ထုတ်ပိုက်နှင့် fittings များအတွက်ဆေးထိုးတန်ဆာပေးအရေးအပါဆုံးအားသာချက်အချို့မှာနေသောခေါင်းစဉ်:
အဆိုပါပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလွန်အမင်းဖြစ်ပါတယ် အကျိုးရှိစွာ ။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်တိကျသောနှင့်ကိုက်ညီသောအမြောက်အများပမာဏထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ဘို့သင့်လျော်သည်။
The process is very repeatable and does not require any additional inputs in the manufacturing phase. The production process is highly automated and the products manufactured are almost အမှား-အခမဲ့ .
The injection molding process is ideal for bulk production of precise products.
The pipes and fittings manufactured using the injection molding technique have greater ဆန့အစှမျးသတ်တိ ကိုအခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
သွန်းသောပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်အားနည်းစေနိုငျသောအဘယ်သူမျှမအဆစ်သို့မဟုတ်အလွှာနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပေါ်လာသော။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Filler ထပ်မံထုတ်လုပ်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုခိုင်မာစေရန်ဆေးထိုးမှိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
One of the most significant benefits of using injection molding for manufacturing products is the ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှု of the production process.
The bulk of the resources and investment is needed for designing the product and the production mold.
Once the product and molds have been designed, the manufacturing of products can be done in bulk quantities reusing the same production mold.
This brings down the overall cost of production and makes the manufacturing process highly cost-effective.
အဆိုပါပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာနည်းပညာလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်များအတွက်ကုန်ကြမ်းအဖြစ်ပလပ်စတစ်၏တစ်ဦးထက်ပို type ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူထုတ်လုပ်သူပေးပါသည်။
အဆိုပါနည်းပညာထုတ်လုပ်သူထက်ပိုမိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု2ကွဲပြားခြားနားသော ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ဘို့ပလတ်စတစ်အမျိုးအစား။
အဆိုပါထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးမှာရောက်လာရန်ဤအခွင့်ကောင်းကို ယူ. ပလတ်စတစ်အမျိုးမျိုးရောနှောနေခြင်းနိုင်ပါတယ်။
ပိုက်လျောက်ပတ်တန်ဆာလေ့ပိုက်နှင့် fittings ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုထုတ်လုပ်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါပိုက်အများစုအနေနဲ့ဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်ပေါ့ပါးပြီးအကြမ်းခံဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါပေါ့ပါး feature ကိုအများဆုံးအခြေအနေများအတွက်သုံးပါနှင့်တပ်ဆင်ရန်သူတို့ကိုလွယ်ကူစေသည်။ ပိုက်လျောက်ပတ်တန်ဆာများ၏အသုံးအများဆုံး applications များ၏အချို့ကိုအောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်:
အစိုင်အခဲက Wall သွယ်တန်းထားသောပိုက်
အဆိုပါအစိုင်အခဲမြို့ရိုးကိုပိုက်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ထိရောက်မှုလွယ်ကူသည်။ ဤရွေ့ကားပိုက် PVC အသုံးပြု. ဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကနေထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါအစိုင်အခဲမြို့ရိုးကိုပိုက်ခိုင်မာခြင်း, ရှုထောင်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆစ်များကဲ့သို့ feature များလိုအပ်နေပါသည်ဘယ်မှာရဆေိုးနှင့်မျက်နှာပြင်ရေ Non-ဖိအားရေနုတ်မြောင်း, များအတွက်အမျိုးမျိုးသော application များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
ဤရွေ့ကားပိုက်ချေးနှင့်ဓါတုပစ္စည်းမှအကြမ်းခံခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ အစိုင်အခဲမြို့ရိုးကိုပိုက်လေ့ထိုကဲ့သို့သောသန့်ရှင်းရဆေိုး, အိမ်သူအိမ်သားဝန်ဆောင်မှုနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပိုက်, လမျးခရီးနှင့်ဆဲရေနုတ်မြောင်းအဖြစ်အကြမ်းခံရေနုတ်မြောင်းများနှင့်အပ်ချုပ်သူစနစ်များ, တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံမှာက Wall သွယ်တန်းထားသောပိုက်
အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံမှာမြို့ရိုးကိုပိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အသုံးပြုပစ္စည်းမှလေးစားမှုနဲ့ optimized ဒီဇိုင်းရှိသည်။ အဆိုပါဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်စနစ်တကျမြို့ရိုးကိုပိုက်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။
စနစ်တကျမြို့ရိုးကိုပိုက် 10-မီတာနက်နဲသောပင်လယ်အထိပုဂ္ဂလိကရေနုတ်မြောင်းနှင့်အများပြည်သူရဆေိုးအတွက်အသုံးပြုရန်စံပြဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားပိုက်လည်းအမျိုးမျိုးသောသည်အခြားပိုက်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါပိုက်ပေါ့ပါးပင်အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများအတွက်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပါတယ်။ ဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံမှာမြို့ရိုးကိုပိုက်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလွန်အားကောင်းတဲ့နှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ကသက်ရောက်မှုများနှင့်ချေးခံနိုင်ရည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောဒီဇိုင်းနှင့်တပ်ဆင် parameters များကိုအောက်တွင်အသုံးပြုသောအခါ, 50 ကျော်နှစ်ပေါင်းကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။
အတားအဆီးပိုက်သုံးခုကပ်လျက်တည်ရှိအလွှာ၏အလယ်တွင်အဖြစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သတ္တုအလွှာကိုထည့်သွင်းမယ့်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အတားအဆီးပိုက်အများစုဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အခြားညစ်ညမ်းကနေသောက်ရေ, ပိုက်ဖြတ်သန်းရဲ့ contents ကာကွယ်ပေးရန်အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါပိုက်လည်းပြည်တွင်းအပူစနစ်များအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအားဖြင့်ချေး၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချ, ပစ္စည်းနှင့်ရေစနစ်အဝင်ကနေအောက်ဆီဂျင်ကိုကာကွယ်တားဆီးသောအတားအဆီးကနေထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအတားအဆီးပိုက်ပိုက်၏အပြင်ဘက်နှင့်အတွင်းပိုင်းအလွှာအကြားကပ်လျက်တည်ရှိသောအစေးကပ်လျက်တည်ရှိပစ္စည်းကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပိုက်အများစု polyethylene သို့မဟုတ် polybutylene အသုံးပြု. ဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Jointers ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ သူတို့ကယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ယိုစိမ့်-အခမဲ့ပိုက်စနစ်များကိုဖွဲ့စည်းရန်နည်းလမ်းများ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်ပိုက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
Different types of jointer include couplers, TEE, elbows 900-450, crosses, sockets etc. The jointers can be connected with the pipes byapush fit joint usingarubber seal or byacement solvent system or welding.
Jointers are very helpful in joining together pipes and creating an efficient network of the pipe system. Straight pipes are mostly connected by pushing the plain end of one pipe into the socketed end of the other pipe.
PVC pipes are made from the injection molding process. The pipes are ပေါ့ပါး ပြီးအလွန် အကြမ်းခံ . They also impact resistant and highly corrosion resistant.
ကြောင့်ကြောင့်အလွန်အမင်းပေါ့ပါးဖြစ်ခြင်းငှါ၎င်းထိုသို့တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အဆိုပါပိုက်တင်းကျပ် PVC ဒြပ်ပေါင်းများကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့် PVC ပိုက်ကို အသုံးပြု. ၏အရေးပါသောအားသာချက်ဖြစ်သည့်အက်ကြောင်းနှင့်အရိုးကျိုးဖို့ခံနိုင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။
သတ္တုပိုက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, PVC ပိုက်သိသိသာသာ contents တွေကိုများ၏စီးဆင်းမှုဖို့အရည်ပွတ်တိုက်မှုနှင့်ခုခံမှုကိုလျော့နည်းစေသည့်ချောမွေ့မြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်သည်။
ဒီ feature အတွက်ရလဒ်တွေကို တိုးတက်လာသောစွမ်းဆောင်ရည် ဟာ PVC ပိုက်၏ဘဝသံသရာကျော်နှင့်လျော့နည်းစေ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များ များလွန်း။
Copyright 2020 © CBPMM မြေပုံအညွှန်း